The MYAWADY Daily: မြန်မာ့တပ်မတော်သို့ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ မီးရထားစက်ခေါင်းနှင့်တွဲများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်
မြန်မာ့တပ်မတော်သို့ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ မီးရထားစက်ခေါင်းနှင့်တွဲများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် မီးရထားစက်ခေါင်းများအား
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ မြန်မာ့တပ်မတော်သို့ တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် လူစီးမီးရထားပေါ်၌
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင် မီးရထားစက်ခေါင်းများအားနံ့သာရည်များ ပက်ဖျန်းပေးစဉ်။
မြန်မာ့တပ်မတော်သို့ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ မီးရထားစက်ခေါင်းနှင့်တွဲများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ဘူတာကြီးရှိ အမှတ် (၁) စင်္ကြန်၌ကျင်းပပြုလုပ် ရာတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကျော်ဆွေ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိန်ဝင်း၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသန့်စင်မောင်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အောင်စန်း၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်အောင်မြင့်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး မှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang၊ စစ်သံမှူး Senior Colonel Xiong Shaowei ၊ မြန်မာ့မီးရထားမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသူရိန်ဝင်းနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Hong Liang၊ က မီးရထားစက်ခေါင်းနှင့်တွဲများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ထို့နောက် မီးရထားစက်ခေါင်း၊ တွဲများနှင့်ပတ်သက်သော အထောက်အထား စာရွက် စာတမ်းများအား စစ်သံမှူး Senior Colonel Xiong Shaowei က လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရာ စစ်ထောက်ချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ညိုစောကလက်ခံရယူပြီး ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် စစ်ထောက်ချုပ်မှ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးထံ အထိမ်းအမှတ်လက်ဆောင်ပေးအပ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးက အမှတ်တရ လက်ဆောင်အား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ထံသို့ ပေးအပ်သည်။
ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ တပ်မတော် အရာရှိကြီးများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးတို့က မီးရထားစက်ခေါင်း များအား နံ့သာရည်များ အသီးသီးပက်ဖျန်း ပေးကြသည်။
၎င်းနောက် အဆိုပါလူစီးမီးရထားဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၊ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး၊ စစ်သံမှူး၊ မြန်မာ့မီးရထားမှ ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး တို့သည် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများနှင့်အတူ နေပြည်တော်ဘူတာမှ တပ်ကုန်းဘူတာသို့ လိုက်ပါစီးနင်းကြသည်။ ယင်းနောက် တပ်ကုန်းဘူတာတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး၊ စစ်သံမှူးတို့သည် အမှတ်တရစုပေါင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကြသည်။
တရုတ်ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်မှ မြန်မာ့တပ်မတော်သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့် မီးရထားစက်ခေါင်းနှင့်တွဲများအားလုံးမှာ အသစ်များဖြစ်ပြီး မြင်းကောင်ရေ ၂၀၀၀ အားရှိ Dalian အမျိုးအစားစက်ခေါင်း ၂ ခု၊ Sifang အမျိုးအစား (Passenger Coach) လူစီးတွဲ ၆၈ ယောက်စီး ၁၀ တွဲ၊ Meishan အမျိုးအစား (Covered Wagon) ၃၂ တန် အလုံပိတ်ကုန်တွဲ ၁၀ တွဲတို့ဖြစ်သည်။
ယခုကဲ့သို့ တရုတ်ပြည်သူ့ လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော်မှမြန်မာ့ တပ်မတော်သို့ မီးရထားစက်ခေါင်းနှင့် တွဲများလွှဲပြောင်း ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် ယခင်တပ်မတော် အနေဖြင့် မြန်မာ့မီးရထားမှ ရထားနှင့်တွဲဆိုင်းများကို ငှားရမ်းမျှဝေပြီး အသုံးပြုခဲ့ရာမှ ယခုအခါ မြန်မာ့မီးရထားအနေဖြင့် ခရီးသွားပြည်သူများ အတွက်ပိုမို ဆောင်ရွက်ပေးလာ နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်အနေဖြင့်လည်း ပြည်သူများ၏ အကျိုးစီးပွားနှင့်ပြည်တွင်း ကုန်ဈေးနှုန်း တည်ငြိမ်ရေး အတွက် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု ကိုလည်းတစ်ဖက် တစ်လမ်းမှ လိုအပ်သလို ကူညီပေးနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင်မည်သည့် နေရာဒေသတွင်မဆို သဘာဝဘေးအန္တရယ် ကျရောက်ချိန်များ တွင်လည်း တပ်မတော်အနေဖြင့်အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ငန်းများကို မြန်မာ့မီးရထားနှင့် ပူးပေါင်း၍ ထိရောက်လျင်မြန်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး တပ်မတော်မှ လုပ်ဆောင်နေသည့် ပြည်သူ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းများ တွင်လည်း ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြု လုပ်ဆောင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။